काठमाडौं : एमालेका विद्यासुन्दर पहिलो, रञ्जु दर्शना दोश्रो र कांग्रेस - माओवादी पत्तासाफ हुने सङ्केत !
ARCHIVE, POLITICS » काठमाडौं : एमालेका विद्यासुन्दर पहिलो, रञ्जु दर्शना दोश्रो र कांग्रेस - माओवादी पत्तासाफ हुने सङ्केत !
काठमाडौं महानगरपालिकामा मतगणना जारी छ । अहिलेसम्मको मतगणनामा नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले ३५ मत पाएका छन् भने विवेकशीलकी रञ्जु दर्शना र साझा पार्टीका किशोर थापाले बराबरी २६ मत पाएका छन् ।
उनीहरुले कााँग्रेस मेयरका उम्मेदवार राजुराज जोशीलाई पछि पारेका छन् । कांग्रेसका जोशीले २३ मत पाएका छन् । अहिले प्रदर्शनीमार्गस्थित सभागृहमा मतगणना भइरहेको छ । ताजा तमपरिणाम अनुसार नै मत संख्या अगाडि बढेको अवस्थामा काँग्रेस माओवादी पत्तासाफ हुने सङ्केत देखिएको छ ।